Bit By Bit - Introduction - 1.2 Tinokugamuchira digitaalinen zera
The digitaalinen zera iri kwose kwose, iri kuwedzera, uye anochinja zvinhu zvinogoneka nevatsvakurudzi.
The nechepakati pafungidziro chebhuku rino ndechokuti digitaalinen zera anosika mikana mitsva nokuda mumagariro tsvakurudzo. Vaongorori zvino vanogona kuchengeta maitiro, bvunza mibvunzo, vanomhanya kuedza, uye zvido munzira dzakanga hazvitomboiti vari zvikuru ichangopfuura kare. Pamwe mikana mitsva ava kuuya pangozi itsva; vanotsvakurudza ikozvino anogona kukuvadza vanhu munzira dzakanga zvisingabviri vari zvikuru ichangopfuura kare. Panobva mikana iyi uye njodzi ndiyo kuchinja kubva analoginen zera kusvika digitaalinen zera. Uku hazvina kuitika zvose kamwechete-seboka chiedza-chinja akatendeuka pamusoro-uye kutaura zvazviri, kuchinja haisati wakakwana. Asi, nokuda pfungwa iyi isu ndamboona zvakakwana kuziva kuti chinhu chikuru chiri kuitika.
Imwe nzira kuona uku ndiko kutsvaka zvinhu muupenyu hwako hwezuva nezuva. zvinhu zvakawanda muupenyu hwako kuti yaimbonzi Analog zvino digitaalinen. Pamwe iwe akashandisa kushandisa kamera pamwe firimu uye ikozvino iwe kushandisa digital kamera (izvo zvichida ndiro chikamu enyu digitaalinen foni). Pamwe iwe akashandisa kuverenga pepanhau mumuviri uye zvino iwe verenga paIndaneti pepanhau. Pamwe iwe kushandiswa kubhadhara zvinhu mumuviri mari uye ikozvino iwe mari pamwe kadhi. Muchiitiko chimwe nechimwe, kuchinja kubva analoginen kuna digitaalinen zvinoreva kuti mamwe mashoko chiri akabatwa ochengetwa digitally.
Kutaura zvazviri, kana akatarira mukati uwandu hwezvinhu zvose zvabatanidzwa., migumisiro yokuchinja vari zvinoshamisa. Kuwanda kwemashoko munyika iri kuwedzera nokukurumidza zvikuru kuti ruzivo inochengetwa digitally, izvo hwezvekukurukurirana pachisara yedzimudzangara, uye kubatanidzwa nomumwe (Figure 1,1) (Hilbert and López 2011) . Zvose emashoko aya digitaalinen auya pakunzi "mashoko makuru." Kuwedzera kuputika uku digitaalinen data, kufanana kukura kwedu kuwana kadambari simba (Figure 1,1) (Hilbert and López 2011) . Maitiro-kuwedzera izvi digitaalinen mashoko uye kuwedzera kadambari-dzinoratidza hapana chiratidzo kuderera.
Figure 1.1: Information okuchengetera kugona uye kadambari simba vari kuwedzera zvinoshamisa. Uyezve, mashoko okuchengetera zvino anenge chete digitaalinen (Hilbert and López 2011) . kuchinja izvi mikana incredible kuti magariro nevaongorori.
Nekuti zvakafunga evanhu tsvakurudzo, ndinofunga chinonyanya chinokosha digitaalinen zera iri makombiyuta kwose kwose. Kutanga sezvo mumba kadikidiki michina kuti zvavaiva chete hurumende uye makambani makuru, makombiyuta dzave nguva todzokera kukura uye kuwedzera mukukurumbira. Mumwe gumi sezvo 1980s, isu ndamboona rudzi mutsva kadambari buda: pachake makombiyuta, Laptops, akangwara nhare dzinotakurika, uye ikozvino midzi processors (kureva, makombiyuta mukati mano zvakadai motokari, unorinda, pamadhigirii) (Waldrop 2016) . Kuwedzera makombiyuta aya ubiquotous kuita zvakawanda chaizvo kupfuura overenga; naivowo kuona, chitoro, nekufambisa mashoko.
Nokuti vaongorori, zvinorehwa makombiyuta kwose kwose vari nyore kuona online, mamiriro ezvinhu ari chakayerwa zvizere uye amenable kuti kwacho. Somuenzaniso, imwe paIndaneti chitoro kunogona unganidza nyore chinopa chaiwo mashoko pamusoro kutenga uye rokutenga maitiro evanhu vatengi. Uyezve, imwe paIndaneti chitoro kunogona randomize nyore vamwe vatengi kugamuchira kunotenga ruzivo uye vamwe kugamuchira mumwe. Kukwanisa ino randomize pamusoro Tracking zvinoreva kuti paIndaneti muzvitoro unogona kumhanya kuramba randomized kudzora kuedza. Kutaura zvazviri, kana waita nokusingaperi akatenga chinhu kubva paIndaneti chitoro maitiro ako rave yakawana uye unofanira anenge zvechokwadi kwave ubatanidzwe ane kuedza, kana iwe aiziva kana kuti kwete.
zvizere-akayera-zvizere-randomizable nyika ino haisi chete kuitika paIndaneti; zviri kuramba kuitika kwose kwose. Physical zvitoro kare kuunganidza zvikuru zvakawanda kutenga data, uye vari kukura kwezvivako kuongorora vatengi kunotenga maitiro uye vanosanganisa kwacho kupinda purogiramu mabhizimisi tsika. Nemamwe mashoko, kana uchifunga pamusoro digitaalinen zera haufaniri kungofunga online, unofanira kufunga kwose kwose. Digital zera munzanga nokutsvakurudza kunosanganisirei vanhu kuwadzana zvizere.-digital Spaces uye kunosanganisirei vanhu vachishandisa digitaalinen mano munyika chaiyo.
Kuwedzera zvichiita nokuyerwa maitiro uye randomization nokurapwa, ari digitaalinen nayewo kwakaita nzira itsva kuti vanhu kutaura. itsva idzi dzokukurukurirana nadzo kubvumira Vatsvakurudzi kumhanya itsva kuongorora uye pakusika vakawanda kutsigirana pamwe nevamwe vavo uye voruzhinji.
A mutsoropodzi kuti vanoti hapana nezvaanogona aya zvechokwadi itsva. Kureva kare, pave paine zvimwe mberi zvikuru nemano dzavanhu 'yokukurukura (semuenzaniso, neteregirafu (Gleick 2011) ), uye makombiyuta vave kuwana nokukurumidza panguva nehasha nhamba chete kubvira kuma1960 (Waldrop 2016) . Asi, chii mutsoropodzi ichi chisipo ndechokuti pane imwe nguva kupfuura zvimwe inova chinhu chakasiyana (Halevy, Norvig, and Pereira 2009) . Heuno Ringanidzo dzandinoda. Kana kunombata mufananidzo bhiza, ipapo iwe une mufananidzo. Uye, kana iwe kunombata 24 mifananidzo bhiza pa wechipiri, ipapo iwe une firimu. Zvechokwadi, firimu rinongova boka mapikicha, asi chete ufe zvakaoma mutsoropodzi vaizotaura kuti mapikicha uye mafirimu zvakafanana.
Vanotsvakurudza vari mubishi kuita sanduko raakashandisa rakangofanana achichinja kubva Photography kusvika cinematography. Uku hazvirevi kuti zvose zvatakadzidza kare anofanira kungosiyiwa. Sezvakanga zviga mifananidzo vazivise misimboti cinematography, misimboti munzanga tsvakurudzo kare vaudza evanhu tsvakurudzo ramangwana. Asi, kuchinja kunorevawo kuti hatifaniri kuramba vachiita zvakafanana. Asi, tinofanira nokubatanidza Nzira kare pamwe nezvaanogona aripo uye nezveramangwana. Somuenzaniso, kutsvakurudza pamusoro Blumenstock uye nevamwe raiva musanganiswa zvetsika tsvakurudzo ongororo pamwe vamwe vangadana kuti mashoko nesayenzi. Vose zvinhu iwayo zvakakodzera; kana kuongorora mhinduro kana foni zvinyorwa vega vaiva zvakakwana. More kazhinji, ndinofunga kuti kuwedzera vaongorori magariro evanhu vanofanira vanobatanidza munzanga sayenzi pamwe date nesayenzi kuti kushandisa mikana yose digitaalinen zera. Kuramba chete kutora mifananidzo kana isu raigona kuita mafirimu kwaizova kukanganisa.